Ururka Al-Shabaab oo Weerar ku qaaday Hotel Dayax ee magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab oo Weerar ku qaaday Hotel Dayax ee magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Ururka Al-Shabaab ayaa weerar qarax ku qaaday Hotel Dayaxa ee magaalada Muqdisho kaasoo loo maleynayo in loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah ,Hotelkan ayaa kamid ahaa hoteelada ay degan yihiin Siyaasiyiinta iyo xildhibaanada cusub.
Qaraxa kadib ayaa la maqlay rasaas cuslus oo la is-dhaafsanayo,wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Ismiidaamiyaalka ah ay gudaha u galeen hoteelka.
Qaraxa 2aad ayaa ka dhacay wax kadib isla goobta,waxaana loo adeegsaday gaari kale oo goobta lagu diyaariyey bom lagu soo xirey,waxay waxyeelo badan kasoo gaartay weriyaal gaaraya 3 kamid ahaa dadkii goobta qaraxu ka dhacay ku cararay ,waxaana kamid ahaa sawir-qaadaha wakaaladda wararka ee AP.
Goobaha caafimaadka qaarkood ayaa la gaarsiiyey dad ka badan 30 qof oo qaba dhaawacyo kala culus,sidoo kale Isbitaalka ayaa la geeyey saddex qof oo meyd ah.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka hotel Dayax,weeraraada Al-Shabaab ayaa si xawli ah u laba kacleeyey maalimihii u danbeeyey.